पढाइ खर्च जुटाउन आँप बेचिरहेकी बालिकाको १२ वटा आँप २ लाख रुपैयाँमा किनिदिने व्यक्ति को थिए ? - Onlinenews Global
June 30, 2021 laxmiLeaveaComment on पढाइ खर्च जुटाउन आँप बेचिरहेकी बालिकाको १२ वटा आँप २ लाख रुपैयाँमा किनिदिने व्यक्ति को थिए ?
एजेन्सी -को रोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द भयो । त्यसपछि ५ कक्षाकी विद्यार्थी तुलसी घरमै बस्न बाध्य भइन् । विद्यालयले पढाइ सुरु गरेको तुलसीले जानकारी पाइन् तर उनी कक्षामा उपस्थित हुन सक्दिनथिन् । कक्षा अनलाइनबाट चलिरहेको थियो र यसका लागि तुलसीसँग स्मार्टफोन थिएन । त्यसैले स्मार्टफोन किन्ने पैसा जम्मा गर्न उनले सडक किनारामा आँप बेच्न थालिन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
उनले तुलसीका १२ वटा आँप प्रतिआँप १० हजारका दरले १ लाख २० हजारमा किनिदिए । अब अमेया हेतेले तुलसीको सपनालाई नयाँ उडान दिएका छन्, तुलसी कहाँसम्म पुग्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यो पैसाबाट लुतसीले १३ हजार रुपैयाँमा स्मार्टफोन किनेकी छिन् । बाँकी रकम उनले अगाडिको पढाइको लागि राखेकी छिन् । अब भने उनी सडक किनारामा आँप बेचिरहेकी देखिन्नन ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****